5 qalabka lagu sameeyo boorarka internetka | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Design Graphic, Qalabka Naqshadeynta
Boodhadh waa a hab aad u wanaagsan oo lagu dhawaaqo nooc kasta oo dhacdo ah, mashruuc ama dadaal. Naqshadeedu waa aasaasi, maxaa yeelay kuwa arkaa waxay kaliya joojinayaan inay akhriyaan haddii ay wax ku filan garaacaan. Maxaa intaa ka badan, macluumaadka ku dhejisan boodhka waa inuu ahaadaa mid si hagaagsan loo habeeyay oo la akhrin karo. Sidaa darteed, dhammaan go'aannada aad gaarto waa muhiim, qaab qorista, cabirka qoraallada, midabka, sawirrada, faahfaahin kasta waa in laga taxadaraa. Haddii aad doorato barnaamij wanaagsan oo aad iyaga ku abuureyso waxay shaqadaada ka dhigeysaa mid aad u fudud iyo, nasiib wanaag, maanta uma baahnid inaad noqotid sayid weyn oo naqshadeynta garaafka ah si aad u sameyso a boodhadhka bilicsanaanta iyo soo jiidashada leh. Waxaa jira qalab bilaash ah oo bilaash ah oo shabakadda kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh oo fudud u abuurto waxyaabaha. Qoraalkan waxaan ku sameynay xulasho 5 qalab si boorar loogu sameeyo khadka tooska ah Ha moogaan!
1.1 Sida loo sameeyo boodhadh Adobe Spark
2 Warshadda Poster
2.1 Sida loo sameeyo boodhadh leh Wershad Poster
3.1 Sida loo qorsheeyo boodhadhka Crello
4.1 Sida Loo Sameeyo Boorarka Canva
5.1 Sida loo qorsheeyo boodhadhka Fotojet
Adobe Spark waa app loogu talagalay Adobe Systems loogu talagalay shabakadda iyo aaladaha gacanta. Iyada oo barnaamijkan waxaad abuuri kartaa waxyaabo aad u soo jiidasho leh, bogagga shabakadaha, fiidiyowyo gaagaaban iyo googogo shabakadaha bulshada. In kasta oo aad ku heli karto oo kaliya ilaha oo dhan rukumo lacag leh, waxaad haysataa wax badan oo la heli karo lacag la'aan ah oo bilaash ah. Adobe Spark wuxuu bixiyaa arrimo, markaa waa a ikhtiyaar aad u fiican haddii aad u baahan tahay inaad abuurto boodhadh indho-qabad leh, si fiican loo qaabeeyey oo aan waqti lahayn. Sidoo kale, haddii aad doorbido, waxaad ka bilaabi kartaa feyl maran oo naftaada u naqshadee.
Sida loo sameeyo boodhadh Adobe Spark
Shaashadda guriga, xagga sare, waxaad ku leedahay mashiin raadin. Haddii aad ku qorto boodhadh ama boodhadh halkaas, waxaad marin u heli doontaa noocyo kala duwan oo noocyo ah. Naqshad kasta si buuxda ayaa wax looga beddeli karaa, markaa waad la qabsan kartaa qaabkaaga iyo baahiyahaaga.
Maareynta barnaamijka waa mid dareen leh. Adoo gujinaya template, naqshadeynta ayaa si toos ah u furi doonta. Shaashadda waxaad arki doontaa laba baararka dhinac: dhanka midig, waad wax ka beddeli kartaa asalka, midabada oo xitaa waad wax ka beddeli kartaa cabbirka boodhadhka maxaa yeelay nashqaddu si toos ah ayey ula qabsan doontaa cabirka cusub; Midda bidix, waxaad ku dari kartaa qoraal, sawirro, astaamo, astaamo iyo ilo kale. Markaad dhamaysid, waxaad kala soo bixi kartaa ama ku daabici kartaa si toos ah shabakadahaaga bulsho. Cilladaha kaliya ee jira ayaa ah hadii aanad iska qorin boosta waxaa ku badbaadaya apsumad yar oo ku taal geeska midig ee hoose.
Warshadda Poster waa tifaftire khadka tooska ah si gaar ah looga fikiray si loo sameeyo boodhadh, boodhadh, xaashiyaha xaashiyaha iyo xaashiyaha laga soo qaaday moodeellada, si fudud oo dhakhso badan. Gudaha webka waxaad ka heli doontaa tusaalooyin midabbo iyo cabbirro kala duwan leh, iyo waxa ugu fiican waa inay dhammaantood yihiin bilaash ah oo wax laga beddeli karo.
Sida loo sameeyo boodhadh leh Wershad Poster
Abuurista boodhadhkan tifaftiraha waa mid aad u fudud. Markii aad galaysid webka, fiiri dusha shaashadda ereyga "arrimo" Si aad uhesho nashqadaha oo dhan, dooro midka adiga kugu habboon oo isticmaal astaamaha Warshadda Boostada si aad ugu waafajiso sida aad jeceshahay. Dhinaca midig ee shaashadda waxaad ka heli kartaa dhammaan walxaha ka kooban boodhadhka loo habeeyay iyadoo loo eegayo xaaladdooda. Baarka sare waxaad ka heli doontaa qalab aad ku saxdo oo aad ku dhammaystirto naqshadeyntaada. Waad wax ka beddeli kartaa wax kasta, qoraallada, midabada xitaa waad ku dari kartaa waxyaabo cusub.
Crello waa qalab naqshadeynta garaafka ah gebi ahaanba bilaash ah khadka tooska ah oo kaa caawin doonta inaad si dhakhso leh oo fudud u abuurto waxyaabaha. Gudaha barnaamijka waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada arrimo, qaababka warbaahinta bulshada, cinwaannada cinwaannada, shahaadooyinka, iyo dabcan boorar iyo boorar. Maxaa intaa ka badan, waxaad ka heli kartaa ilo kala duwan oo fara badan taasi waxay kaa caawin doontaa inaad kobciso abuurkaaga oo aad siiso taabashadaada shakhsi ahaaneed.
Sida loo qorsheeyo boodhadhka Crello
In laga sameeyo boorar Crello waa inaad tagtaa shaashadda guriga oo mashiinka wax lagu raadiyo ku qor erayga "boodhadh". Sidan ayaad ku heli doontaa sheybaarada kala duwan ee barnaamijka bixiyo. Guji kan aad ugu jeceshahay oo kaliya waa inaad tafatirtaa si uu kaaga dhigo mid adiga kugu habboon. Baarka midigta ku yaal, waxaad ka heli doontaa guddi siinaya helitaanka qalab kala duwan. Waad ku dari kartaa sawirro, walxo, qoraallo iyo xitaa waad soo dejin kartaa ilahaaga. Markaad dhamayso waxaad kala soo bixi kartaa naqshadaada ama waxaad si toos ah ugula wadaagi kartaa shabakadahaaga bulshada. Haddii aad doorbideyso inaadan ku shaqeynin sheybaarada, waxaad had iyo jeer ka bilaabi kartaa feyl maran, adigoo ka xulanaya shaashadda guriga "Cabbirka qaaska ah" iyo gelitaanka cabirka ku habboon (waxaan soo jeedinayaa 42 x 59.4).
Qodis waa mid ka mid ah aaladaha ugu caansan uguna caansan ee qaabeynta qaabeynta internetka marka la abuurayo dhammaan noocyada maaddooyinka Barnaamijku wuxuu bixiyaa arrimo fara badan oo kala duduwan oo leh nashqado soo jiidasho leh oo gabi ahaanba wax laga beddeli karo Waxaad sameyn kartaa ku dhowaad wax walba, kaararka ganacsiga, boorarka, fiidiyowyada, boostada loogu talagalay shabakadaha bulshada, bandhigyada ... EHelitaanka Canva waa bilaash, inkasta oo kheyraadka qaar lagu heli karo oo keliya rukunka rukunka. Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaad ku heli kartaa natiijooyin aan caadi ahayn adoo adeegsanaya kaliya ilaha bilaashka ah, way ku filan yihiin iyo, marka lagu daro, waxaad had iyo jeer gali kartaa kheyraadkaaga inaad ballaariso fursadahaaga. Naqshadaynta boodhadhkan maqaalkani waa fikrad aad u wanaagsan, maxaa yeelay inkasta oo aad khadka tooska ah ku jirto, tayada waxa aad hesho waa mid ku habboon oo xitaa Way ku caawin kartaa hadaadan laheyn xirfado badan oo qaabeynta sawirada ah.
Sida Loo Sameeyo Boorarka Canva
Canva waa qalab si fudud loo isticmaali karo, sidaa darteed wax dhibaato ah kala kulmi maysid la qabsiga. Si aad ugu sameysid boorar Canva, waa inaad tagtaa mashiinka raadinta ee ku yaal korkiisa guriga oo geli ereyada "boodhadh" ama "boodhadh". Barnaamijku wuxuu ku tusi doonaa dhammaan noocyada arrimo, oo leh noocyo iyo waraaqo kala duwan. Maxaa intaa ka badan, waxaad ku kala shaandheyn kartaa midabbo, si aad u haysatid kuwa aad xiiseyneyso. Sikastaba, hadaad jeceshahay naqshad, laakiin midabku uusan ku qancin, xusuusnow taas palette marwalba waa la beddeli karaa.
Markaad gujiso midkoodna, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo tafatirka! Canva waxay u shaqeysaa si la mid ah Crello. Qaybta dhinaca midig waxaad ka heli kartaa kheyraad kala duwan iyo qaybta hoose waxaad ka heli doontaa qalabka ugu muhiimsan.
Kuwa kale barnaamijka qaabeynta internetka oo bixiya astaamo la mid ah Crello iyo Canva waa Sawir. On madal this sidoo kale waxaad ka heli doontaa tiro aad u tiro badan iyo ilaha kaa caawin doona inaad abuurto qaybo aan caadi ahayn. Waxa intaa dheer in ay awoodaan in ay faahfaahin ka naqshadaha, sidoo kale waa suurto gal intafatir sawiro ama abuur koolaji Wax walba waa isku mid! Faa'iido kale ayaa ah in loo isticmaalo xitaa uma baahnid inaad isdiiwaangaliso. Cilladaha kaliya ee aan arko ayaa ah in haddii aad rabto inaad sameysato feylal cabbirkoodu dhan yahay, waa inaad bixisaa lacagta pro.
Sida loo qorsheeyo boodhadhka Fotojet
Si aad uga sameysato boorar Fotojet, gudaha bogga hoyga dhagsii badhanka "Abuur naqshad." Barnaamijku wuxuu ku tusi doonaa arrimo aad loo isticmaalay. Qeybta Suuqgeynta, dhagsii "boodhka" oo xulo naqshada aad rabto. Taasi, haa, hubi inaysan ku calaamadeyn taaj, maxaa yeelay taasi waxay ka dhigan tahay in template la bixiyay.
Tafatirida Fotojet way fududahay, qeybta saxda ah waad awoodaaku dar qoraal iyo ilo kale. Gujinaya curiye kasta wuxuu muujinayaa dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah in loo beddelo. Markaad dhamaysid, pWaxaad kala soo bixi kartaa abuurkaaga ama kula wadaagi kartaa shabakadaha bulshada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 5 qalab si boorar loogu sameeyo khadka tooska ah